2019 Depond in 17th China International Husbandry Expo-Wuhan
Fanafody fitsaboana anti-bakteria
Lincomycin & Spectinomycin
Glutaral Ary Deciquam
Fitsaboana ny biby
Ny 18 mey 2019 no nosokafana ny 17-taona (2019) China Animal Husbandry Expo ary 2019 ny International International Hus Husryry Expo ao Wuhan International Expo Center. Miaraka amin'ny tanjona sy iraka fanavaozana no nitarika ny fampandrosoana ny indostria, hampiseho sy hampiroborobo ny teknolojia sy vokatra farany an'ny indostrian'ny fiompiana biby ny fampiroboroboana ny fahaizana vaovao sy ny haavon'ny indostrian'ny biby ary ny fampiroboroboana ny fanavaozana ny indostria. Ny fampirantiana telo andro dia natrehan'ny orinasa mihoatra ny 1000 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny biby fiompy.
Amin'ny maha orin'asa miaro ny biby any an-trano, ny vondrona Depond dia tompon'andraikitra amin'ny "miaro sy manara-maso ny indostrian'ny biby fiompy". Araka ny fepetra vaovao momba ny fanovana sy ny fanavaozana ny indostrian'ny fiompiana biby, Depond dia mitondra vokatra stratejika mifanaraka amin'ny firosoan'ny fivoarana ho avy hipoitra ao amin'ny Expo momba ny biby.
"Mazava tsara, asa tsara, kalitao ary maitso" no fanenjehana ny vokatra Depond. Ny vokatra asongadin'ity fampirantiana ity dia tsy ny vokatra mafana lafo ihany izay nosedrain'ny tsena, fa koa ireo vokatra vaovao stratejika misy votoaty avo lenta ary nandresy ny sokajy telo ny fanafody biby vaovao. Nandritra ny fampirantiana, ny mpiara-miombon'antoka vaovao sy antitra izay tonga tamin'ny fampiratiana dia mampiseho fahalianana amin'ireo vokatra ao amin'ny Depond, ny ankamaroan'ny mpanjifa vaovao dia naneho ny fahavononany hiara-hiasa, ary ny fifanakalozana hafa akaiky dia hotanterahina aorian'ny fihaonana.
Ity fampirantiana ity dia tsy varavarankely mahomby fotsiny ho an'ny vondrona mba hampisehoana ny heriny, mampivoatra ny mpanjifa ary hampiroborobo ny vokatra, fa koa fepetra lehibe ho an'ny vondrona hiditra lalina amin'ny tsena ary hahatakatra ny fangatahan'ny indostria sy ny fironana iraisam-pirenena. Ny mpampianatra teknikan'ny vondrona sy ny solontenan'ny mpanjifa dia mifanakalo tsy tapaka amin'ny foto-kevitra momba ny fiarovana miaro, ny olana momba ny fambolena, ny teknolojia izay mitarika izao tontolo izao, ny teknolojia ary ny fahalalana hafa, izay manome hevitra momba ny làlana fikarohana sy fampandrosoana ary ny fanavaozana ny teknolojia ny vokatra Depond. Amin'ny ho avy, hanohy ny halalin'ny fangatahana ny tsena i Depond, mampihatra ny foto-kevitry ny "escort ho an'ny tantsaha", ary hanome vokatra azo antoka kokoa sy mahomby ho an'ny indostrian'ny fiompiana.
No.8 Lalana Shuangtong, distrika Luquan, tanàna Shijiazhuang, faritanin'i Hebei, Sina
© Copyright - 2010-2020: Zo rehetra voatokana.
Alefaso ny mailaka